Ogaden News Agency (ONA) – Tacsi ku socota dhamaan bulshadii ku hongowday Jeel Ogaadeen – Xaaji Maxamad
Tacsi ku socota dhamaan bulshadii ku hongowday Jeel Ogaadeen – Xaaji Maxamad
Posted by ONA Admin	/ March 14, 2014
Walaalayaal waad lawada socoteen in dad badan oon waxba galabsan ay ku dabranaayeen goobta Jaxiimada ah ee loo yaqaano jeel ogaadeen. Asbuucii lasoo dhaafay ayay kuwii dadka xero ooday bixiyeen ogaysiis ah- dadka waanu sii daynaynaa, kadibna dad badan oo meelo kala duwan kasoo safray ayaa jirey iyagoo ujeedkoodu ahaa in ruux waliba kadhex baadho qaraabadisii sanado kahor laga kaxaytay. Markii dadkii qayb yar laga soo daayay, intii lasoo daayay ayaa qaar bartii ku naf-baxeen qaarna habeeno kadib ayay dhinteen, in badanoo kalana way liitaan sida lasoo wariyay.
Akhyaareey waxaan jeclaystay inaan Tacasi tiiraanyo ku dheehantahay u gudbiyo dhamaan bulsho,wayntii ogadeniya ee ku hongowday jeel ogaadeen kalana kulantay dhacdadaas foosha xun. Waxaan leeyahay ilaahay Janadii hasiiyo inta dhimatay inta qulyaayoga ahna alle ha shaafiyo, inta wali xareysana alle hakasoo daayo. Eheladii iyo qaraabadii ay kabaxeena samir iyo ajir badsi alle haku Arsaaqo.
Waxaa mudan inaan xuso Qiso Nabigu-SCW ka sheekeeyay, oo u dhacday sidan– Waxuu sheegay inay jirtay Naag Bisad soo xidhay, kadibna cuntadii kajartay, sidii bayana Bisadii gaajo ugu dhimatay. Naagtii waxaa lageeyay Naartii, sabakoo ah buu yidhi waxna mayna siinin iskamana ay dhaafin dhulkeeda ha iska xaabtee.
Waxaa is waydiin leh kuwa kumanaanka muslimiinta ah cuntadii kajaray xaalkoodu sida u noqon doono, haduuna Rabi naxariis lasoo gaadhin, waa su’aal ku fiicnayd in iyaga la waydiiyo.
Xikmad carabi ah ayaa tidhaaha ALJAZAA’U MIN JINSIL CAMAL oo micnaheedu yahay-Abaal marintu waxay u dhigantaa waxaad sameysay. Ujeedada aan kaleeyahay ayaa ah, haday iyagu umad ilaahay gaajo ku laayeen iyagana waxaa dhici karta in Aakhiro gaajo lagu laayo.
Liyuu Poolis iyo horjooga,yaashoodaba waxaan leeyahay, miyaydaan lahayn Aabayaal, Hooyooyin, Walaalo, Habaryaro Eedooyin iyo Xaasas iyo Caruuro, ma dhul kafoodhac baad tihiin, Malooliyaalyohow lasoo aruurshay, sideed isugu raacdeen inaad dumarka xabsiga ku jira kufsi hareeraha kala martaan, IBTA dhagax la idinka saar ilaah baan baryee. Dadkii wali qaarbaa tuban meeshii xataa ma odhanayaan war suga ama iska taga, xaageese lagu arkay maxaabiis habeen lasii daayo waxay kabaqanayaan kaameradaha in ceebtoodu safar raacdo.
Gabagabadii xikmadii shacabka ayaa ahayd, hagaadho hagaadhee wadanka nin lahaabaa walee la wareegi.